အမေးများသည့်မေးခွန်းများ – CityRewards
City Rewards အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခြင်းနှင့် သုံးစွဲမှုရပ်နားခြင်း
City Rewards ကို မသုံးတော့ဘူးဆို ဘာဖြစ်မလဲ။
City Rewards ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ပါက အကောင့်ကိုပယ်ဖျက်မှာဖြစ်ပြီး အသုံးမပြုရသေးသောအမှတ်များအားလုံးဆုံးရှုံးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ အကောင့်ထဲရှိ အမှတ်များကို အသုံးပြုချင်ပါက အကောင့်မပယ်ဖျက်ခင် အသုံးပြုပေးဖို့ အကြံပေးအပ်ပါတယ်။
City Rewards အစီအစဉ်ကို မသုံးချင်တော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
City Rewards အစီအစဉ်ကို သင့်အတွက် ရေရှည် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ပျော်ရွှင်စေအောင် ရည်မှန်းထားသော်လည်း City Rewards အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်အသုံးမပြုချင်တော့ပါက အချိန်မရွေး အကောင့်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ City rewards Customer care ဌာန ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
City Rewards အကျိုးခံစားခွင့်တွေရအောင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
City Rewards အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိဖို့ အကောင့်ဖွင့်ပြီးနောက် အကောင့်ကို အသက်သွင်းရပါမယ်။ ရက် ၃၀ အတွင်း အကျုံးဝင်သောဆိုင်များတွင် အနည်းဆုံး ကျပ် သုံးသောင်းဖိုးဝယ်ယူပြီး ဝယ်ယူချိန်မှာ မိမိ၏ City Rewards App ကို မပျက်မကွက် ပြသရပါမယ်။ ဂရုပြုရမယ့်အချက်မှာ ဝယ်ယူထားသောစာရင်းကို ဘောက်ချာထုတ်ပြီးသွားလျှင် City Rewards ၏ အမှတ်စာရင်းတွင် ပေါင်းထည့်လို့မရတော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငွေမရှင်းခင် City Rewards App ကို တစ်ပါတည်းပြသဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပြီး ထိုသို့ပြုလုပ်မှလည်း ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများမှ သင့်ရဲ့ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ City Rewards လက်ကျန်ငွေစာရင်းကို ပြုပြင်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
City Rewards အစီအစဉ်မှာ ဒေါင်းလုတ်ဆွဲခြင်း၊ အကောင့်ဖွင့်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းများအတွက် အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း အကျိုးခံစားခွင့်များစတင်အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် ကတ်ဖြတ်ခြင်း သို့မဟုတ် App သုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရက် ၃၀ အတွင်း ကျပ် သုံးသောင်းဖိုးအထိ ဈေးဝယ်ခြင်းပြုလုပ်ရပါမယ်။ App မှာ အခမဲ့ဖြစ်သော်လည်း ကတ်ဖြင့်သုံးစွဲလိုပါက ကတ်ဖိုး ၃၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကတ်ကို City Mart Holding Company ၏ အရောင်းဆိုင်များ၏ Customer service ကောင်တာတွင် ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
အမှတ်တွေကို ငွေသားနဲ့ လဲလို့မရနိုင်သော်လည်း နောက်အခေါက် ဈေးဝယ်တဲ့အခါ ငွေသားအစားပေးချေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- အမှတ် ၁၀၀ ပြည့်တိုင်း ကျပ်ငွေတစ်ရာပေးဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
ငွေချေတုန်းက City Rewards ပြဖို့ မေ့သွားလို့ပါ။ အဲ့ဒီအတွက်ရော အမှတ်ရနိုင်သေးလား။
အမှတ်ရရှိဖို့ ငွေရှင်းတဲ့အချိန်မှာ အမြဲ City Rewards App သို့မဟုတ် ကတ် မဖြစ်မနေပြသရပါမယ်။ ငွေရှင်းပြီးသွားချိန်မှာတော့ အမှတ်ပေးလို့မရတော့ပါဘူး။
ပရိုမိုးရှင်းရဲ့သက်တမ်းကို စစ်ပေးပါ။ သက်တမ်းကုန်သွားတဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို သုံးလို့မရတော့ပါဘူး။ အကယ်၍ သက်တမ်းရှိရဲ့သားနဲ့ သုံးလို့မရတာဆိုရင် ကျေးဇူးပြုပြီး App မှတဆင့် Customer Care ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
City Rewards နဲ့ ဆို Discount တွေ ရမှာလား။
City Rewards App မှာပြသထားတဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပရိုမိုးရှင်းများဟာ ရောင်းချသည့်အဖွဲ့အစည်း၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်တွင်မူတည်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ အထူးဈေးနှုန်းဖြစ်နိုင်သလို၊ တစ်ခါတလေ အထူးလျှော့ဈေးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် City Rewards မှတဆင့် discount ရနိုင်ပါတယ်။
ဘာလို့ City Rewards အကောင့်မှာ တခြားသူတွေနဲ့ ပရိုမိုရှင်းအတူတူမရတာလဲ။
City Rewards ရဲ့ ပရိုမိုးရှင်းတွေကို သုံးစွဲသူ၏ဝယ်ယူမှုပုံစံပေါ်မူတည်ပြီး သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးစွဲသူတစ်ဦးချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည့် ကမ်းလှမ်းချက်များကို ပေးနိုင်ဖို့ ပရိုမိုရှင်းများကို တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမတူညီအောင် သီးသန့်ပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ အကောင့်ကို ပိုပိုသုံးခြင်းဖြင့် ထူးခြားသောကမ်းလှမ်းချက်များကို ပိုပို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။”
Seasons bakery မှာရော City Rewards အကောင့်ကို သုံးပြီး အမှတ်ယူလို့ရမလား။
ရပါတယ်။ City Rewards App ကို မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာရှိတဲ့ City Mart Supermarket, Ocean Supercenter, Marketplace by City Mart, City Care Health and Beauty, Seasons Bakery & Café, City Baby Club, City Books and Music နဲ့ Safari Bookstore တွေမှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
ကတ်ကို အိမ်မှာမေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ အမှတ်ရဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။
City Rewards ကတ်ကို အိမ်မှာကျန်ခဲ့ပြီး App လည်းမရှိဘူးဆိုရင် ငွေရှင်းကောင်တာမှာ ဖုန်းနံပါတ် သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်ကို ပြောပြပြီး အမှတ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ကတ် သို့မဟုတ် App မရှိဘဲ အမှတ်များကို သုံးစွဲလို့မရပါဘူး။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကို ငွေမရှင်းခင်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်နည်းကတော့ City Rewards App ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး အကောင့်ဖွင့်ကာ ကတ်များကို ပေါင်းထည့်ထားရမှာပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကြောင့် ဖုန်းထဲမှာ App ရှိနေပြီး ကတ်ကို သယ်စရာမလိုတော့ဘဲ ခလုတ်တစ်ချက်လေးနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေ၊ ငွေပေးချေမှုစနစ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆုလက်ဆောင်တွေက ဘယ်အချိန်အထိ အကျုံးဝင်ပါသလဲ။
City Rewards အကောင့်ကနေ ရရှိမယ့် ဆုလက်ဆောင်တွေမှာ ရောင်းချသူဘက်က သတ်မှတ်ထားတဲ့ သက်တမ်းနဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်သိရှိဖို့ ဖော်ပြချက်များကို စစ်ဆေးပါ။ ဆုလက်ဆောင်များတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ကွဲပြားခြားနားချက်ရှိနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့အကောင့်ထဲ အမှတ်တွေမရောက်လာဘူးဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
တကယ်လို့ အကောင့်ထဲ အမှတ်တွေ မရောက်လာဘူးဆို ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ်ဈေးဝယ်ခဲ့တဲ့ အချက်အသေးစိတ် (နေ့ရက်၊ အချိန်၊ ဝယ်ယူခဲ့သည့်နေရာ၊ ဝယ်ယူခဲ့တဲ့တန်ဖိုး) နဲ့ ဘောက်ချာနံပါတ်ကို ပြောပြပေးပါ။ အမြန်ဆုံးကူညီပေးနိုင်ဖို့ လုပ်ဆောင်ပါ့မယ်။
ဈေးဝယ်ပြီး ငွေကိုင်က အမှတ်ထည့်ပေးပေမယ့် အမှတ်မရလို့ပါ။
အနီးဆုံး Customer Service ကောင်တာ သို့မဟုတ် City Rewards Customer ဌာနသို့ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ဖြင့် ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ဒီလိုမဆက်သွယ်မီ ဝယ်ယူလိုက်သောကုန်ပစ္စည်း၏ အကျုံးဝင်မှုနှင့် အင်တာနက်နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိမရှိ ပြန်လည်စစ်ဆေးပေးပါ။
ကိုယ့်အမှတ်နဲ့ တခြားသူရဲ့အမှတ်ကို ပေါင်းပြီး ငွေချေလို့ရလား။
အမှတ်တွေကို ပေါင်းပြီး ငွေချေလို့မရပါဘူး။ မိမိ၏အမှတ်မှာ မိမိတစ်ဦးတည်းအတွက်ဖြစ်ပါသည်။
အမှတ် ၁ မှတ်ရဖို့ ဘယ်နှစ်ကျပ်သုံးရမလဲ။
သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာ ကျပ် ၂၀၀ ဖိုး (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါပြီး) သုံးပြီးတိုင်း ၁ မှတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့် အကောင့်မှာ အမှတ်ဝင်ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမှာလဲ။
ငွေပေးချေပြီး မိနစ်အနည်းငယ်အကြာမှာ အမှတ်များနဲ့ လက်ကျန်ငွေပမာဏများ စာရင်းအသစ်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ ကြန့်ကြာမှုရှိပါက အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှု၊ App Store မှ App အတွက် Update နှင့် ဖုန်းတွင်းပြဿနာရှိမရှိ စစ်ဆေးပေးပါ။ စစ်ဆေးပြီးတဲ့အထိ အမှတ်မဝင်သေးပါက City Mart Customer Service ကောင်တာသို့ လျင်မြန်စွာဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဘာမှလည်း မဝယ်ဘဲ အမှတ်တွေ နုတ်သွားတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
App ထဲမှာ History ကို ပြန်စစ်ကြည့်ပါ သို့မဟုတ် Customer Care ဌာနဖုန်းနံပါတ် ၀၉၉၇၂၉၉၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ အမှတ်များအားလုံး ရရှိချိန်မှ တစ်နှစ်ပြည့်ချိန်တွင် သက်တမ်းကုန်မှာကို သတိပြုပေးပါ။ သင့်အမှတ်တွေ သက်တမ်းကုန်သွားလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရထားတဲ့ အမှတ်တွေကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းကိုပေးလို့ရလား။ ရတယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲ။
မိမိ ရရှိထားသော City rewards အမှတ်များကို တခြားသူအား လွှဲပြောင်းပေးလို့မရပေမယ့် City Rewards Cash Wallet ထဲတွင် ဖြည့်သွင်းထားသော ပိုက်ဆံကို မိမိ၏ အဆက်အသွယ်စာရင်းထဲမှ သူငယ်ချင်းကို App ထဲမှ GIft section ဖြင့် လက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါသည်။ အခုလောလောဆယ် ဒါကတော့ In-App လုပ်ဆောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
သုံးပြီးသားအမှတ်များအတွက် ပြန်အမ်းငွေကို ရနိုင်မလား။
ငွေသားနှင့် ပေးချေထားသော ဈေးဝယ်ယူမှုအတွက် တန်ဖိုးတူညီသောအစားထိုးပစ္စည်းနှင့် လဲလှယ်ရယူနိုင်သော်လည်း ငွေသားပြန်အမ်းပေးမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း အမှတ်နှင့် ဝယ်ယူထားသော ပစ္စည်းများကို ပြန်လဲပေးလို့မရပါဘူး။ City Rewards အမှတ်နှင့် ဝယ်ယူထားသောပစ္စည်းအတွက် ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံပါက ပထမနည်းလမ်းသို့ပြောင်းပြီး တန်ဖိုးညီသော အစားထိုးပစ္စည်းကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ကိစ္စဖြစ်ပွားပါက Customer Service ကောင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပေးပါ။
အမှတ်များကို ရရှိသောနေ့မှစပြီး ၁ နှစ်အကြာအထိ သုံးလို့ရပါတယ်။
အမှတ်များကို ဘယ်လို သုံးသွားမှာလဲ။
အကျုံးဝင်သော ပစ္စည်းများဝယ်ယူတဲ့အခါ ကောင်တာမှာ ငွေကိုင်အား City Rewards App သို့မဟုတ် ကတ်ကို ပြသပေးပါက သုံးစွဲနိုင်သော အမှတ်များနှင့် ဆုလက်ဆောင်များကို အလိုအလျောက်နုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အရင်က ဝယ်ခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ ဘောက်ချာရှိသေးပါက ထိုအတွက်ရော အမှတ်ရနိုင်သေးပါသလား။
စိတ်မကောင်းပါဘူး။ City Rewards အစီအစဉ်မသုံးခင် အရင်က ဝယ်ခဲ့သော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် အမှတ်များမရရှိနိုင်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် ဈေးဝယ်ယူမှုစာရင်းကို ငွေရှင်းပြီးပါက City rewards App သို့မဟုတ် ကတ်ထဲသို့ အမှတ်များကို ပေါင်းထည့်ပေးလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ငွေမရှင်းခင် ငွေကိုင်အား မိမိ၏ City Rewards အကောင့်ကို ပြသဖို့အထူး တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
အမှတ်များကို City Mart Holdings ရဲ့ channels တွေဖြစ်တဲ့ City Mart Supermarkets, Ocean Supercenters, Marketplace by City Mart, City Care Health and Beauty stores, Seasons bakery Café နှင့် အခြား အကျုံးဝင်သောဆိုင်များမှာ ဈေးဝယ်တဲ့အခါ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်များကို အမှတ် ၁၀၀ ရပြီးတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၁ မှတ်= ၁ကျပ်နှုန်းဖြင့် ဥပမာ- အမှတ် ၁၀၀ ကို ငွေကျပ် ၁၀၀ အစား ပေးချေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမှတ်တွေကို ရယူတဲ့အခါ ကန့်သတ်ချက်များရှိပါသလား။
အကျုံးမဝင်သောကုန်ပစ္စည်းအချို့၊ City Gift ကတ်များ၊ Gift Voucher များ၊ ပရိုမိုးရှင်းချထားသောပစ္စည်းများ၊ ဝိုင်နှင့် ယမကာ၊ ဖုန်းငွေဖြည့်ကတ် နှင့် အခြားကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသည့်အခါ City Mart Holdings Ltd. ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမှတ်မရရှိအောင် ကန့်သတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ ကန့်သတ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းစာရင်းအသစ်အတွက် cityrewards.com.mm/non-qualifying-products/ ကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ချိန်ညှိရန် ( Setting )
ကိုယ့်နေရာနဲ့ အနီးဆုံး City Mart ကို ဘယ်မှာရှာနိုင်လဲ။
City Rewards App နဲ့ ကိုယ်နဲ့အနီးဆုံး City Mart ကို ရှာနိုင်ပါတယ်။ App ထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ Menu မှ Stores ကို နှိပ်ပါ။ အချက်အလက်များ မှန်ကန်စွာပြသနိုင်ဖို့ GPS ကဲ့သို့ နေရာပြတဲ့ location service လိုအပ်သောကြောင့် အင်တာနက်ဒေတာဖွင့်ရပါမယ်။
App ထဲက History ကို ဘာအတွက်သုံးနိုင်လဲ။
App ထဲက Transaction History တွင် အရင်က ဈေးဝယ်ခဲ့သော အချက်အလက်များ၊ ရရှိခဲ့သောအမှတ်များနှင့် သုံးစွဲခဲ့သောအမှတ်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ မိမိအကောင့်ဖြင့် အခြားလူတစ်ယောက်က ဈေးဝယ်ထားခဲ့ရင် ဒီအချက်အလက်တွေကို ကြည့်ပြီး သိနိုင်ပါတယ်။
City Rewards App ကနေ ရတဲ့ notifaication တွေကို ဘယ်လိုပိတ်ရမလဲ။
ဤလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ Login >> Profile >> Setting >> Notifications ပြီးရင် ကိုယ်နဲ့ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မယ့် အချက်ကိုရွေးပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Setting ဘာသာစကားကို ဘယ်လိုပြောင်းရလဲ။
ဤလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးပါ။ Login >> Profile >> Setting >> Language. ပြီးရင် Zawgyi ၊ Unicode ၊ English ဘာသာစကား ၃ မျိုးထဲက နှစ်သက်ရာဘာသာစကားကို ရွေးချယ်လိုက်ပါ။
City Rewards အသုံးပြုသူတွေဟာ မိမိရဲ့ ဖုန်းထဲက Contact တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့ Media File တွေအား App ကနေ ဖတ်ယူခြင်းကိုခွင့်ပြုဖို့ ဘာဖြစ်လို့ လိုအပ်တာလဲ?
App ရဲ့ Feature တွေအားလုံးကို အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုပေးဖို့လိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Contact တွေဖတ်ယူခြင်းကိုခွင့်ပြုတဲ့အတွက် ထည့်သွင်းထားတဲ့ငွေသားနဲ့ City Gift card တွေကို မိမိရဲ့ သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ မိသားစုတွေစီ လက်ဆောင်အဖြစ် လွယ်လွယ်ကူကူ ပေးပို့ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ဓာတ်ပုံတွေကို ခွင့်ပြုပေးခြင်းကနေ မိမိအနေနဲ့ Profile မှာ စိတ်ကြိုက်ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရွေးချယ်တင်ထားလို့ ရပါလိမ့်မယ်။ Media File တွေကို ခွင့်ပြုပေးခြင်းကတော့ App ရဲ့ အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ သီးသန့် Promotion အစီအစဉ်၊ စိတ်ဝင်စားဖွယ် Promotion တွေနဲ့ အခြားကမ်းလှမ်းမှုတွေပေးပို့လာခြင်းကို Phone ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
App ၊ ကတ် နှင့် အကောင့်
City Rewards သုံးရင် ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲ။
City Rewards App နဲ့ဆို ကတ်တွေအားလုံးကိုပေါင်းပြီး ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုသုံးလို့ရပါတယ်။ ကတ်ပျောက်တဲ့အခါ ဒုက္ခရောက်တာမျိုးတွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။
City Rewards အကောင့်နဲ့ Facebook အကောင့်နဲ့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်လို့ရလဲ။
City Rewards App ကိုသွားပြီး ဤ လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ပါ။ Login >> Profile >> Setting >> Connect your Facebook ကိုရွေးပြီး လမ်းညွှန်ချက်အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးပါ။
အရင်က City Rewards သုံးပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမသုံးဖြစ်တာကြာပြီ။ အခု အကောင့်ထဲဝင်လို့ မရတော့ဘူး။
အကောင့်ကို သုံးစွဲခွင့်ရပ်တန့်လိုက်တာ/ ဖျက်လိုက်တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
QR Code ကို ဘယ်လိုသုံးရလဲ။
ငွေရှင်းတဲ့အခါ QR ကုတ်ကို ငွေကိုင်က scan ဖတ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းပျောက်သွားရင် ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
City Rewards ကတ် ပျောက်သွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
City Rewards ကတ်ပျောက်သွားရင် ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
လူတစ်ယောက် အကောင့်တစ်ခုပဲ ဖွင့်လို့ရပါတယ်။
City Rewards သုံးတဲ့ပုံစံ (ကတ်၊ App) ပြောင်းချင်လို့ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကတ် သုံးနေပြီဆိုရင် App ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ကတ်ကို စာရင်းသွင်းပါ။ ကတ်နံပါတ်ကို သုံးပြီးတော့ပဲဖြစ်စေ QR code ကို Scan ဖတ်ပြီးတော့သော်လည်းကောင်း စာရင်းသွင်းနိုင်ပါတယ်။ App သုံးနေပြီးသားဆို ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက် ဆက်သွယ်ပေးပါ။
PIN မေ့သွားလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ကိုယ့်ကတ်ကို တခြားလူတွေ သုံးလို့ရလား။
ကတ်မှာ PIN လို လျှို့ဝှက် အချက်အလက်တွေပါတဲ့အတွက် တခြားသူတွေကို ပေးသုံးဖို့ ခွင့်မပြုထားပါဘူး။
App ကို install လုပ်လို့မရဘူး။
App ကို Android 5.0 / iOS9နှင့်အထက်ပဲ သုံးလို့ရပါတယ်။
အင်တာနက် ရမရစစ်ပြီးရင် ဖုန်းနံပါတ်နဲ့၊ လျှို့ဝှက်ကုတ်မှန်မမှန် စစ်ပါ။
လျှို့ဝှက်ကုတ်မေ့သွားရင် အောက်ပါအချက်တွေအတိုင်းတစ်ဆင့်ချင်းလိုက်လုပ်ပေးပါ။ Login >> Profile >> Setting >> Reset your Password. ပြီးရင်ပြတဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေအတိုင်း ဆက်လုပ်ဆောင်ပေးပါ။
အကောင့် ဖွင့်တုန်းက သုံးခဲ့တဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို ပြောင်းလို့ရလား။
ဒီလုပ်ဆောင်ချက်မှာ အရေးကြီးတဲ့ ဒေတာအချက်အလက်တွေ ပါဝင်သက်ဆိုင်တဲ့အတွက် မလိုအပ်တဲ့ဒေတာအချက်အလက်ခိုးယူခံရမှုကနေ ကာကွယ်ဖို့ သင်ကိုယ်တိုင်ပြောင်းလို့မရပါဘူး။ အကောင့်ဖွင့်တုန်းကသုံးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုပြောင်းချင်ရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Hotline နံပါတ်သို့မဟုတ် Customer Service ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
App ကို မတော်တဆ ဖျက်လိုက်မိတယ်။ အကောင့်ထဲဘယ်လို ပြန်ဝင်လို့ရလဲ။
App ကို နောက်ထပ်ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး ဖုန်းထဲကိုသွင်းပေးပါ။ ကိုယ့်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ လျှို့ဝှက်ကုတ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန်ရိုက်ထည့်လိုက်ရင် အကောင့်ထဲပြန်ဝင်လို့ရပါပြီ။
App က ခဏခဏ အလုပ်လုပ်တာရပ်သွားတယ်။
ကိုယ်သုံးနေတဲ့ Android နဲ့ iOS က နောက်ဆုံးဗားရှင်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဗားရှင်းမှန်ပြီး အလုပ်မလုပ်တာဆိုရင်တော့ ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ။
အကောင့် ဘယ်နှစ်ခု ဖွင့်လို့ရလဲ။
CIty Rewards အကောင့်တိုင်းကို နိုင်ငံသားကတ်နံပါတ်/ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ် နှင့် အဓိကဖုန်းနံပါတ်တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးခြင်း၊ ပိတ်ခြင်းနှင့် အကောင့်ပိုင်ရှင်ကွယ်လွန်ခြင်း အစရှိသည့် ခြွင်းချက်များအတွက် မှတ်ပုံတင်နံပါတ်တစ်ခုကို အကောင့်တစ်ခုသာ အသုံးပြုခွင့်ရှိပါတယ်။
ကတ်ကိုင်တဲ့သူအတွက် ဆုလက်ဆောင်များနဲ့ ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်များကို ဘယ်ကနေ ကြည့်လို့ရပါသလဲ။
ကတ်သုံးတဲ့သူတွေအတွက် ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်တွေ၊ ပရိုမိုးရှင်းအသစ်တွေကို SMS နဲ့ ပို့ပြီးပြောပြပေးမှာပါ။ ကမ်းလှမ်းချက်စာရင်းအပြည့်အစုံကို City Rewards App တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆက် ဆုလက်ဆောင်များ၊ ကမ်းလှမ်းချက်များစတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးများကို ပြည့်ပြည့်ဝဝအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စောစောစီးစီး App ကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲ၊ စာရင်းသွင်းပြီး ကတ်ပေါင်းထည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
City Gift ကတ်ကို ဘယ်မှာ ငွေထပ်ဖြည့်လို့ရလဲ။
City Mart ရဲ့ Customer Service ကောင်တာမှာ City gift ကတ်တွေကို ငွေဖြည့်လို့ရပါတယ်။
City Gift ကတ်ထဲက လက်ကျန်ငွေက ဘယ်တော့သက်တမ်းကုန်မှာလဲ။
City Gift ကတ်ထဲက လက်ကျန်ငွေက စသွင်းပြီး ၁၂လ အကြာ သက်တမ်းကုန်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တမ်းမကုန်ချင်ရင် City Rewards App နဲ့ ကတ်ကို ပေါင်းလိုက်ပါ။
သူငယ်ချင်းဆီ City Gift ကတ်ပို့ချင်ရင် ဘာလိုအပ်ပါသလဲ။
City Rewards ကနေ လွှဲရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းရဲ့ City rewards App ဖုန်းနံပါတ်ကို သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
City Rewards နဲ့ City Gift ကတ်ကို ဘယ်လိုချိတ်ရမှာလဲ။
City Rewards App ထဲမှာ Add your Card ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် City gift ကတ်ကို City Rewards App အတွက် စာရင်းသွင်းခဲ့သလို စာရင်းသွင်းပြီး သုံးလို့ရပါပြီ။
City Rewards နဲ့ City Gift ကတ်ကို ချိတ်လို့ရလား။
App ထဲမှာ ကတ်ကို အကောင့်နဲ့ပေါင်းပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ ဈေးဝယ်ပြီး အမှတ်တွေရယူနိုင်ပါတယ်။
City Gift ကတ်နဲ့ ဝယ်ရင် အမှတ်ရော ရမှာလား။
City Rewards အကောင့်ရှိမှ အမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကောင့်မရှိရင် ဈေးဝယ်လို့ရပါတယ်။
ငွေသားဝန်ဆောင်မှု (Cash Wallet)
မရည်ရွယ်ဘဲ ငွေလွှဲလိုက်မိတယ်။ ဘာလုပ်ရမလဲ။
ကျေးဇူးပြုပြီး ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇၂ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ လွှဲပြီးသားငွေတော့ ပြန်ရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
City Rewards အကောင့်ကို ဘယ်လို ငွေသွင်းရလဲ။
Customer service ကောင်တာတွေမှာ လွယ်ကူစွာ ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဈေးဝယ်ထားတာ ရှင်းတဲ့အခါ ဘာလို့ PIN နံပါတ် လိုအပ်တာလဲ။
အကောင့်လုံခြုံဖို့အတွက်နဲ့ မိမိအမှတ်နဲ့ လက်ကျန်ငွေတွေ တစ်ယောက်တည်းသီးသန့် သုံးနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားသူတွေ မိမိရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သုံးလို့မရနိုင်ပါဘူး။
အချက်အလက်တွေမှန်လားကြည့်ပေးပါ။ အင်တာနက်ကြောင့် ကြန့်ကြာမှုဖြစ်တတ်လို့ အချိန်ခဏစောင့်ပေးပါ။ ၂၄နာရီနောက်ပိုင်း ငွေမဝင်သေးရင် ၀၉ ၉ ၇၂၉ ၉ ၇၂၇ ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
ဈေးဝယ်ထားတဲ့ပမာဏက လက်ကျန်ငွေထက်များသွားရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
လက်ကျန်ငွေထက်များပြီး ဈေးဝယ်မိရင် လိုအပ်တာကို ငွေသားနဲ့ပေးချေလို့ရပါတယ်။
City Rewards ကနေ ငွေဘယ်လို လွှဲလို့ရလဲ။
City Rewards Wallet လုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ ငွေလွှဲလို့ရမှာ ဖြစ်ပြီး လွှဲပြီးသွားရင် ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
Cash wallet ထဲက လက်ကျန်ငွေကို ငွေသားအဖြစ်ယူလို့ရလား။
မရပါဘူး။ လက်ကျန်ငွေတွေကို ငွေသားအနေနဲ့ ပြန်လဲပေးလို့မရပါဘူး။ ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာ ငွေပေးချေဖို့အတွက်ပဲသုံးလို့ရပါတယ်။
Cash Wallet ဆိုတာဘာလဲ။
Cash Wallet ဆိုတာ City Rewards App နဲ့ ကတ်ထဲမှာ ပါတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး မိမိအကောင့်ထဲကို မိမိစိတ်ကြိုက် ငွေဖြည့်ထားတယ်ဆိုရင် City Mart Holdings နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်တဲ့အခါ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Shop smarter. Get it now!
City Rewards ဆိုသည်မှာ City Mart Holding Company ၏ Loyalty အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ City Mart Holding Company Limited လက်အောက်တွင်ရှိသော လက်လီအရောင်းဆိုင်တိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ City Mall အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ City Rewards အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသောကုန်သည်များ၏ ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
City Rewards ဆိုသည်မှာ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များ
ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် City Mart Holding Company Limited (CMHL, ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွနု်ပ်တို့၏)မှ လုပ်ဆောင်နေသော City Rewards အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် City Rewards ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းနှင့် CMHL ရဲ့ ပတ်သက်မှုကို သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ City Rewards ကို ပါဝင်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံသဘောတူထားသည် ဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။
အသက် ၁၆ နှစ် နှင့်အထက်ရှိ မည်သူမဆို City Rewards အစီအစဉ်ကိုပါဝင်ရန်အတွက် စာရင်း ပေးသွင်းနိုင်ပါတယ်။
စာရင်းပေးသွင်းရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလတ်မှတ်(Passport) မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်နံပါတ် သို့မဟုတ် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်နံပါတ်နှင့် မှန်ကန်သော မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်စွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်များကို တောင်းခံရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အနေနဲ့ လူကြီးမင်းတို့၏ အကောင့်အချက်အလက်များ ပျောက်ဆုံးခြင်း ဒါမှမဟုတ် အကောင့်ပိတ်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်ရန်အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။
City Rewards Application ကို Download ပြုလုပ်ရယူခြင်းနှင့် စာရင်းပေးသွင်းခြင်းတို့မှာ အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ကတ်ဖြင့်အသုံးပြုလိုပါက ကတ်ဖိုး(physical card) ငွေကျပ် ၃၀၀၀ ကောက်ခံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ City Rewards ကတ်ကို City WalletAssist kiosk သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Customer Service တစ်ခုခုမှာ ရယူနိုင်ပါတယ်။
City Rewards အတွက် စာရင်းပေးသွင်းတဲ့အခါမှာ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် PIN (Personal Identification Number) ကို သတ်မှတ်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ PIN နံပါတ်ကို လျှို့ဝှက်ထားဖို့ လူကြီးမင်းမှာပဲ တာဝန်ရှိပါတယ်။ မိမိ PIN နံပါတ်အသုံးပြုပြီး ဝင်ရောက်ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုများနဲ့ ငွေပေးချေမှုအားလုံးအတွက် လူကြီးမင်းမှာပဲတာဝန်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင့် PIN နံပါတ် ကို အခြားသူများသိရှိသွားပြီဟု ယူဆရလျှင် သို့မဟုတ် သင့်အကောင့်ကို မှားယွင်းစွာအသုံးပြုနေသည်ဟု သံသယရှိလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ချက်ခြင်းဆက်သွယ်အကြောင်းကြားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
City Rewards ကို အသုံးပြုဖို့စာရင်းပေးသွင်းခြင်းဖြင့် CMHL မှ ပေးပို့တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအရောင်း ကြော်ငြာများ(promotional communications) နဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်များ (Newsletter) များကို ရယူပါမည်ဟု သဘောတူညီပြီးဖြစ် ပါတယ်။ လူကြီးမင်းအနေနှင့် မရယူလိုတော့ပါက My Account မှာ unsubscribe ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် Application တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး Customer Services ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အကောင့်တစ်ခုသာ ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားအပိုရှိနေသော အကောင့်များကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ အချိန်မရွေး ပယ်ချခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း နှင့် ပိတ်ပစ်ခြင်း လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး သတိပြုစေချင်တာကတော့ လူကြီးမင်း၏အကောင့်ကို တစ်ခြားသူများထံသို့ လွှဲပြောင်းခွင့်မရှိပါ။
အကောင့်အတွက် စာရင်းပေးသွင်းပြီးပါက အကောင့်ကို စတင်အသက်ဝင်လာအောင် ဖွင့်လှစ်ပြီး City Rewards ရဲ့ အကျိုးအမြတ်များကို ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အကောင့်စတင် အသုံးပြုရန်အတွက် လူကြီးမင်းအနေဖြင့် City Rewards အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ ဆိုင်များ(အောက်တွင် ဖော်ပြထားသောနေရာများမှ) မှာ ရက်၃၀ အတွင်း ငွေကျပ် ၃၀၀၀၀ ဖိုး ဈေးဝယ်ရမှာဖြစ်ပြီး အသုံးပြုတဲ့အခါမှာ လူကြီးမင်းရဲ့ City Rewards App ကို ဝယ်ယူစဉ်ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
City Rewards အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ဆိုင်များမှာ၂၀၀ ကျပ်ဖိုး ငွေသားနဲ့ ငွေပေးချေမှုတိုင်းအတွက် အမှတ် (၁) မှတ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် (အခွန်ပါဝင်ပြီး)။
City Express မှာ ၄၀၀ ကျပ်ဖိုး ငွေသားနဲ့ ငွေပေးချေမှုတိုင်းအတွက် အမှတ် (၁) မှတ် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ် (အခွန်ပါဝင်ပြီး)။
အကောင့်ထဲသို့ အမှတ်များ ထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် ဆိုင်များတွင်ဝယ်ယူရာမှာ City Rewards App သို့မဟုတ် ကတ် ကို ပြသရမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်များဟာ ရရှိတဲ့နေ့မှစပြီး တစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ ပျက်ပြယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ငွေပေးချေမှု ပျက်ပြားခြင်းသို့မဟုတ် ငွေပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း(refund) များရှိခဲ့သည်ရှိသော် အဆိုပါ ငွေပေးချေမှုအတွက်ရရှိခဲ့တဲ့ အမှတ်များပြန်လည်နုတ်ယူရန် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
City Rewards အမှတ်များကို အမှတ် ၁၀၀ နှင့်အထက် ရရှိပြီးမှ စတင်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အမှတ် ၁၀၀ မှတ်ကို City Rewards အစီအစဉ်၏ အကျုံးဝင်သောဆိုင်များမှာ အကောင့်ပိုင်ရှင်က City Rewards App သို့မဟုတ် ကတ် ကိုပြသပြီး အမှတ် ၁ မှတ် = ၁ ကျပ်နှုန်းဖြင့် ငွေ ၁၀၀ ကျပ်ဖိုး ပေးချေဝယ်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူရာမှာ ကျသင့်ငွေထက် သင့်အမှတ်မှာ နည်းနေပါက လိုအပ်တဲ့ပမာဏကို ငွေသားနှင့် ဖြည့်စွက်ပေးချေနိုင်ပါတယ်။ အမှတ်များနှင့် ဝယ်ယူမှုများအတွက် ငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ဥပမာ- ဝယ်ယူမှုမှာ ၁၅၀ ကျပ်ဖိုးဖြစ်ပါက သင့်အနေနဲ့ အမှတ် ၂၀၀ နဲ့ အသုံးပြုဝယ်ယူရမည်ဖြစ်ပြီး ပိုတဲ့အမှတ်များကိုပြန်ရမှာ မဟုတ်ပါ။
အရင်ဆုံးရရှိထားတဲ့အမှတ်များ ကို အရင်ဆုံးအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်။
အမှတ်များကို ငွေသားနှင့် ပြန်လည်လဲလှယ်ခွင့်မရှိပါ။
၅။ ငွေဖြည့်ခြင်းနှင့် လွှဲပြောင်းခြင်း
သုံးစွဲသူများ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အကျုံးဝင်တဲ့ မည်သည့်ဆိုင်များမှာမဆို City Rewards အကောင့်ထဲကို ငွေဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ငွေဖြည့်ထားပြီး အသုံးမပြုရသေးတဲ့ ပမာဏကို လက်ကျန်ငွေ (Cash Balance) လို့ခေါ်ပါတယ်။ Application ကိုအသုံးပြုသူများရဲ့ လက်ကျန်ငွေဟာ ပျောက်ပြယ်သွားခြင်းမရှိပါဘူး။ (Gift ကတ်နှင့် ခြားနားမှုအတွက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အမှတ် (၇) ကို ကြည့်ပါ)
City Rewards အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ ဆိုင်များမှာ City Rewards App သို့မဟုတ် ကတ်ကိုပြသပြီး လက်ကျန်ငွေထဲမှ ငွေကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
လက်ကျန်ငွေ ကို ငွေသားနှင့် ပြန်လည်လဲလှယ်လို့မရနိုင်ပါ။
Cash Balance ထဲမှ ငွေများရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုဖြစ်စေ အကုန်လုံးကိုဖြစ်စေ အခြား City Rewards ကိုု အသုံးပြုနေသောသူထံသို့ Application မှာ အဆင့်ဆင့်ပြသထားတဲ့အတိုင်း City Gift Card အနေနှင့် လွှဲပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ ငွေကျပ်ပမာဏ ၁၀၀၀၀ ကျပ် နှင့်အထက်ရှိမှ ဤလုပ်ဆောင်ချက်အောင်မြင်မှာဖြစ်ပြီး စနစ်မှ ငွေကျပ်ပမာဏ ၁၀၀၀၀ ကျပ်နှင့်အောက် City Gift Card များ လွှဲပြောင်းခြင်းကို ပိတ်ပင်ထားပါတယ်။ လွှဲပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုပါက City Rewards App သည် လွှဲပြောင်းမည့် ပမာဏနှင့် ပုံရိပ်ယောင် City Gift Card ကို ဖန်တီးပြီး ထိုကတ်ကို ‘Social Gift' Section ထဲမှ အဆက်အသွယ်စာရင်းတစ်ခုကို ရွေး၍ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် လွှဲပြောင်းရရှိမယ်သူရဲ့ မှန်ကန်သော (တနည်းအားဖြင့်) စာရင်းသွင်းစဉ်က အသုံးပြုခဲ့သော ဖုန်းနံပါတ် သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ သင်လွှဲပြောင်းပေးမည့်သူရဲ့ အချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ သိရှိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ လွှဲပြောင်းပြီးသွားပါက ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍မရနိုင်ပါ။
၆။ အဖွဲ့ဝင်များအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်များ
မကြာမကြာ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ကူပွန်များ၊ မွေးနေ့လက်ဆောင်များအပါအဝင် အံ့အားသင့်စေမယ့် လက်ဆောင်များ၊ အထူးကမ်းလှမ်းချက်များ နှင့် အခမ်းအနားများသို့ ဖိတ်စာများ (အကျိုးခံစားခွင့်များ) ပေးပို့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုများ အပေါ်မူတည်ပြီး အကျိုးခံစားခွင့်များကို စီစဉ်ထားခြင်း ဖြစ်တာကြောင့် အခြားသူများနှင့် မတူညီတဲ့အရာများကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
City Rewrds မှ တစ်သက်တာရရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို လုံးဝလွှဲပြောင်း၍မရနိုင်ပါ။
၇။ လက်ဆောင်ကတ်(Physical City Gift Card)
City Rewards အကောင့်ထဲသို့ City Gift ကတ်များ အကန့်အသတ်မရှိ ထည့်သွင်းသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ City Rewards ရဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်အလုံးစုံကို ရရှိနိုင်ရန်အတွက် Application ကိုအသုံးပြုဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ အခြားစီးပွားရေးလက်တွဲဖက်များ၊ အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်သော လုပ်ငန်းဖက်များ၏ ကတ်များကိုပါ App ထဲထည့်သွင်းနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
Application ကိုအသုံးမပြုချင်ပါက လက်ဆောင်ကတ်များအတွက် အောက်ပါ စည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များက သက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ဆောင်ကတ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းထားသော ငွေပမာဏဟာ ထည့်သွင်းပြီး (၁) နှစ်ကြာတဲ့အခါ ပျောက်ပြယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် City rewards App ကိုသုံးပြီး ‘AddaNew Card’ လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ငွေပမာဏကို စက်ထဲသိမ်းဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မှ အရောင်းအဝယ်စာရင်း၊ လက်ကျန်ငွေနှင့် ပိုက်ဆံများ ပျောက်ဆုံး/ ပျက်စီးခြင်းနှင့် အခြား အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်ပါက မှတ်တမ်းမှတ်ရာများကို ခြေရာကောက်ခြင်းကို ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
City Gift ကတ်များမှာ PIN နံပါတ်မရှိသောကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားရင် အစားထိုးမရရှိနိုင်ကြောင်းကို သတိပြုစေချင်ပါတယ်။ ကတ်ကို လုံခြုံအောင်အမြဲထားရမှာဖြစ်ပြီး ကတ်မှာပါတဲ့ QR Code နဲ့ ကတ်ရဲ့ နံပါတ်ကိုလည်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ မသိစေရန်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လုံခြုံမှုပိုမိုရှိစေရန်အတွက် Application ကိုအသုံးပြုဖို့နဲ့ လက်ဆောင်ကတ်များကိုလည်း City Rewards အကောင့်သို့ထည့်သွင်းဖို့ လေးလေးနက်နက်တိုက်တွန်းပါတယ်။
City Gift ကတ်ပျောက်ဆုံးပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ Customer Care ကောင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပြီး စောစောစီးစီး ကတ်ကို ပိတ်ဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ဤရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကတ်များကို App အတွင်း ထည့်ထားခြင်းဖြစ်စေ၊ လုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်စေ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
၈။ City Rewards အစီအစဉ်တွင် အကျုံးဝင်သော ဆိုင်များ
Application ၏ Participating Outlets ဆိုသည့်နေရာတွင် ဖော်ပြထားသောဆိုင်များအားလုံးတွင် အမှတ်များရရှိခြင်း၊ အမှတ်များသုံးစွဲခြင်းနှင့် ငွေဖြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ City Rewards အစီအစဉ်မှာ အကျုံးဝင်တဲ့ ဆိုင်အသစ်များကို သိရှိရန်အတွက် Application ၏ "Store" အပိုင်းတွင် ကြည့်ပါ။
၉။ City Rewards အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
CMHL မှ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်သော်လည်း City Rewards ၏ ဝန်ဆောင်မှုဟာ လူကြီးမင်း၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် လုံးဝကိုက်ညီလိမ့်မည်လို့ ကတိမထားနိုင်ပါ။ CMHL အနေနှင့် ဒီအစီအစဉ်မှာ အမှားအယွင်းများ ကင်းလိမ့်မည်ဟုလည်း အာမမခံပါ။ ဝန်ဆောင်မှုတွင် အမှားအယွင်းများ ဖြစ်ပေါ်ပါက City Rewards Hotline ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ အနေနှင့် မှားယွင်းမှုများကို အလျင်အမြန် ပြင်ဆင်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ပြင်ဆင်မှုများနှင့် လိုအပ်သည့့် စက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်မှုများအတွက် တစ်ခါတစ်ရံတွင် City Rewards အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းထားခံရနိုင်ပါတယ်။ ဤအစီအစဉ်များကို သုံးစွဲသူများအတွက် အဆင်မပြေမှုအနည်းဆုံး ဖြစ်မည့်အချိန်ကိုသာရွေးပြီး ပြုလုပ်သွားမည့်အတွက် စိတ်ချစွာသုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
၁၀။ ဉာဏပိုင်ဆိုင်မှု (Intellectual Property)
City Rewards မှာပါဝင်တဲ့ အကြောင်းအရာများအားလုံးဟာ CMHL တစ်ဦးတည်းရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး ကူးယူခြင်း၊ ပွားများခြင်းနဲ့ CMHL ရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ စီးပွားရေးအတွက် ပြန်လည်အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
City Rewards ရဲ့ အမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်စေ CMHL ရဲ့ အခြား အမှတ်တံဆိပ်များကိုဖြစ်စေ ခွင့်ပြုချက်မရရှိဘဲ အသုံးပြုခွင့်မရှိပါ။
၁၁။ အကောင့်ကို ဖျက်သိမ်းပိုင်ခွင့် နှင့် ရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်
အောက်ပါအချက်အလက်များဖြစ်ပေါ်ပါက CMHL မှ လူကြီးမင်း၏ အကောင့်အား ဖျက်သိမ်းရန် ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင့်အား သုံးနှစ်နှင့်အထက် အသုံးပြုမှုမရှိခြင်း
City Rewards ကိုလိမ်ညာရန် ရန်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးပြုနေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ရလောက်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ရှိခြင်း
City Rewards ကို မကောင်းသောနည်းလမ်း သို့မဟုတ် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်း
City Rewards ကိုအသုံးပြုရင်း တရားဥပဒေ ကိုချိုးဖောက်ခြင်း
အကောင့်ပိတ်သိမ်းခြင်းခံရပါက ရရှိထားသော အမှတ်များနှင့် အကျိုးခံစားခွင့်များကို ရပ်ဆိုင်းခြင်းခံရမှာဖြစ်ပြီး ဆက်လက်အသုံးပြုခွင့်ရရှိမည်မဟုတ်ပါ။
၁၂။ ဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ခြင်း
City Rewards အစီအစဉ်ကို ကြိုတင်အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ ဖျက်သိမ်းနိုင်ခွင့်ရှိပြီး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များကိုလည်း အချိန်မရွေး ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်နိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ City Rewards ကို အသုံးပြုသည့်အချိန်တွင် ပြဌာန်းထားတဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကို လိုက်နာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များမှာ မမှန်ကန်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်ရှိခြင်းနှင့် လိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်တဲ့အခါမှာ အဆိုပါစည်းကမ်းကိုသာ အကျူံးမဝင်ဟု သတ်မှတ်မှာဖြစ်ပြီး အခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမည်မဟုတ်ပါ။
City Rewards အစီအစဉ်ကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ရရှိထားတဲ့ အမှတ်များကို အသုံးပြုခွင့်ရမှာ မဟုတ်တော့သလို အကျိုးခံစားမှုများလည်း ရပ်ဆိုင်းလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ City Rewards Hotline ကောင်တာသို့ ဆက်သွယ်ပြီး အသေးစိတ်ကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
၁၃။ ဒေတာအချက်အလက်များ လုံခြုံမှုနှင့် ကာကွယ်မှု
လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်များ ကာကွယ်မှု ရရှိနိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဘက်မှ နားလည်လေးစားတဲ့အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာပြဌာန်းထားတဲ့ ဒေတာအချက်အလက်များ ကာကွယ်မှု ဥပဒေများအရ ဆောင်ရွက်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်း၏ အချက်အလက်များ လုံခြုံမှုရှိစေရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ကွန်ပျူတာများကို ကောင်းမွန်သော လုံခြုံရေးစနစ်တိုင်းတာမှုများ ( optimum security measures ) အားအသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အကောင့်ကို အလွဲသုံးစားပြုမှုများ မရှိစေရန် အသုံးပြုမှုများ ကိုလည်း စောင့်ကြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးဝယ်သုံးစွဲသူများအတွက် အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံများခံစားရရှိစေရန် လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အချက်အလက်များကိုအသုံးပြုပြီး လူကြီးမင်းတို့အတွက် သီးသန့်ဖန်တီးထားတဲ့ အကျိုးခံစားမှုများ ပေးအပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်များကို ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဖက်များနှင့်သာ ဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပြီး သူတို့သည်လည်း လူကြီးမင်းတို့၏ အချက်အလက်များကို လုံခြုံစွာကာကွယ်ထားရန် တာဝန်ရှိသူများသာဖြစ်ပါတယ်။
၁၄။ သက်ရောက်မှုရှိသော ဥပဒေများ
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်သတ်မှတ်ချက်များဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ တရားဥပဒေများနဲ့အညီ ရေးဆွဲပြဌာန်း ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် အငြင်းပွားမှုတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပေါ်လာပါက မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ တရားရုံးများမှ အဆုံးအဖြတ်များကိုသာ လက်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁၅။ နိုင်ငံတကာတွင် အသုံးပြုမှု
City Rewards အစီအစဉ်ကို မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် အသုံးပြုနိုင်သည် ဟု CMHL မှ ကတိမပေးနိုင်ပါ။ City Rewards ကို မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပတွင် အသုံးပြုပါက လူကြီးမင်းတွင်သာ တာဝန်ရှိပြီး အဆိုပါနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေများနှင့် သက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
သိရှိလိုသည့် အကြောင်းအရာများရှိပါက အောက်ပါ လိပ်စာသို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်နံပါတ် 341 of 1996-1997
အမှတ် (၁ - ၁၁) ပဒုမ္မာအားကစားကွင်း (အရှေ့ဘက်)၊ ဗားဂရာလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊
City Reward ဆိုသည်မှာ City Mart Holding Company ၏ Customer Loyalty အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ City Rewards အား City Mart Holding Company Limited လက်အောက်တွင်ရှိသော လက်လီအရောင်းဆိုင်တိုင်းတွင်လည်းကောင်း၊ စီးတီးမောလ်အွန်လိုင်းမှဝယ်ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း၊ ပါဝင်သော ကုန်သည်များ၏ ကုန်ပစ္စည်းများ ဝယ်ယူခြင်းအတွက်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဖော်ပြပါ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် သတ်မှတ်ချက်များသည် City Mart Holding Company Limited (CMHL, ကျွန်ုပ်တို့၊ ကျွန်ုပ်တို့၏)မှ လုပ်ဆောင်နေသော City Rewards အစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့် City Rewards ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် လူကြီးမင်းနှင့် CMHL ရဲ့ ပတ်သက်မှုကို သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ City Rewards ကို ပါဝင်အသုံးပြုသူများအားလုံးသည် ဖော်ပြထားသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း နှင့် သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံသဘောတူထားသည် ဟု သတ်မှတ်ပါတယ်။